G-2140 Alloy kpọchie Ụdị Anchor Shackle
G-2140 na-emezu ihe achọrọ maka nkọwapụta Federal RR-C-271F, Ụdị IVA, ọkwa B, klaasị 3, ewezuga ihe ndị ahụ achọrọ n'aka onye ọrụ nkwekọrịta.
A na -ahọrọ imecha azụ azụ ka ọ bụrụ zinc plated (galvanized) maka mgbochi corrosion na ndụ ọrụ ogologo.
Ezubere AID Flat Type Connector (SL) ma mee ya ka ọ bụrụ iwu na nkọwapụta DIN 22258-1 & MT/T99-1997 & PN-G-46705, yana nchara dị elu iji zute akụrụngwa igwe zuru oke.
A na -eji Flat Type Connector (SL) maka ijikọ agbụ njikọ njikọ DIN 22252 na vetikal na kwụ ọtọ na agbụ ndị ọzọ na -ebuga / bulie ngwa.
Dabere na teknụzụ mmepụta ihe na -ebuli elu nke SCIC G80 & G100, anyị na -agbatị ahịrị ngwaahịa anyị nke ọma na eriri nnabata dị mma Grade T (Ụdị T, DAT & DT), maka iji ya na akwụkwọ ntuziaka na -ebugharị akwụkwọ ntuziaka na ike.
Bọketị mbuli, agbụ Chain & njikọta, Chain Wheels, Chain Sprockets, Chave Conveyor
Akụkụ SCIC maka igwe mbuli elu na ihe na -ebu ebu gụnyere: bọketị mbuli, agbụ agbụ & njikọta, wiil agbụ, sprockets chain, chain conveyor, wdg.
Ezubere akụkụ nke SCIC maka igwe mbuli elu na ebu na -eburu ya maka nkọwapụta ụlọ ọrụ dị ka DIN 22256, DIN 745, DIN 5699 & DIN 15234, ma ọ bụ OEM/ODM maka ndị ahịa ihe ndị achọrọ dị na usoro nke nha njikọta nha/ọkwa/ike data, yabụ na anyị na -eme amụma zuru ezu site na akụkụ ruo na usoro nhazi. N'ezie, ike dị otú ahụ dabere na ahụmịhe SCIC nke ọma na nrụpụta njikọ njikọ gburugburu, injinịa na ahụmịhe arụmọrụ & ihe ọmụma n'ime ọtụtụ afọ.